Barwaaqo's Content - Page 27 - Somali Forum - Somalia Online
Khaatumo - Somaliland's last jigsaw coming in for completion.
Ciyigii waa ka baryey Ninkii cuna baa ka liita.
Khaatumo hadashay Abshire August 10, 2016 at 11:46 pm - Reply @Taajka Maakhir Ishaad ka riday sheeko dheer ayaad ku soo koobtay laba qoraal oo kooban, waa sida aad sheegtaye dadka waxa yar ku heshiiya ayaa waxa weyna ku heshiiya, haddii Hartiga waqooyi iyo Samaroon iyo Isaaq ay marka hore midnimmo iyo maamulka Somaliland ku midoobaan sida anigu aan aaminsanahay wax ka weyn oo kalena way dhisi karaan. Haddiise ay ku walaaloobi waayaan hal maamul oo ay u dhan yihiin wax kaloo ka weyna kuma heshiin karaan, Soomaalidu waxay tidhaahdaa haani guntay ka tolantaa. Anigu waxaan weligay aaminsanaa in loo wada hadlo Soomaaliya iyo Soomaliland ama dib ha loo midoobo ama ha la kala faataxaysto, laakiin marka hore waa in Somaliland la dhisaa Puntland-na ay riwaayadda iyo riyada ay ku jirto ka baxdaa ee ay aqoonsataa Xuduudaha Somaliland, markaa waxaa dhici karta in Somaliland ay taageerto in murashax Puntland ahi inuu isu soo taago Madaxtinimada Soomaliya oo wada hadal xalaal ahi bilaabmo ee dhan uun ay isugu biyo shubato. Haddase waxa lagu jiraa nolol iyo geeri midna ma aha. Anigu shakhsiyan markaan midnimo Soomaaliyeed ka hadlayo waxaan u jeedaa Koonfur iyo Waqooyi ee uma jeedo shantii Soomaaliyeed. XASAN SHEEKH WUXUU NOQDAY SUNTII DISHAY RAJADII SOO BIDHAAMAYSAY EE SOOMAALI MIDOWDA MUSTAQBALKA
Fikradan anigu ma lihi balse Waxa dhiibtay rag reer Somaliland ah oo Makir iyo Khaatumo ah Maakir hadashay Taajka Maakhir August 10, 2016 at 10:02 pm - Reply ** SIYAASADDU WAA SHAX KULUL ** Dabcan sida muuqata ba dad badan oo ku taagan ee kuna mintidsan qaddiyadda qabiilladooda ay ka dhasheen ayaa giddigood waxaa ay isla markaasi hadal hayntoodu noqotay “midnimada Soomaaliyeed”. Horta waa in dhawr arrimood ee la isku qaldayo sida ay kala yihiin loo kala shaandheeyo. Midnimada Soomaaliyeed la mid ma aha midnimada Soomaalida Soomaaliya – waa kala labo. Midnimada Soomaaliyeed waa midda guud ee Shantii Soomaaliyeed wada hadheyneysa. Tan is af garan waagu ka taagan yahay waa midda khuseysa Somaliland iyo Soomaaliya. Sabab? Marka Shantii Soomaaliyeed laga hadlayo, labo ka mid ahi waa Somaliland iyo Soomaaliya ee kala ahaan jiray British Somaliland Protectorate iyo Italian Somaliland Protectorate. Isku darsankii labadani ee sanadkii 1960-kii dhacay waxaa fasakhiyay burburkii dagaalkii sokeeye ee1991-kii ku habsaday dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliya isla ahaa. Iminka waxaa ay kala yihiin labadii ay isku darsankii ka hore ahaan jireen. (sii xigo) Taajka Maakhir August 10, 2016 at 10:18 pm - Reply ** SIYAASADDU WAA SHAX KULUL ** Waxaa jaha wareerku ka kala dhex taagan yahay marka hore kuwa qaladka u fahaamsan in ay Jamhuuriyaddii burburtay weli jirto iyo kuwa dhaahsan in ay labadii isla ahaa ay kala fasakhmeen oo billawgii hore dib loogu kala gurtay. Marka labaad waxaa jaha wareerku ka dhex aloosan yahay kuwa Somaliland isla ahaan jiray ee ay qaarkood aaminsan yihiin in Somaliland iyo Soomaaliya loo kala baxay iyo qaarka kale ee weli is leh Soomaaliya sideedii hore ayay tahay. Haddaba waxaa fiican in labo shay la kala saaro, kuwaas oo ah in walaalnimada Soomaaliyeed ay weli Soomaali oo dhammi ka dhexeyso oo aanay iyadu is beddelin, laakiin se siyaasaddu ay is beddeshay maadaama min 1991-kii labadii Shanta Soomaaliyeed ka mid ahaa ee isku darsamay ay asalkoodii hore dib ugu kala gurteen. Haddii ay labadani dib isugu biiri doonaan iyo haddii kale ba, waxaa haatan muhiimaddu tahay in bal marka hore beelihii labadan mid ba ka tirsanaa ay sidii isku darsankii ka hore dib isugu baheystaan oo deetana hadhaw laga wada xaajoodo in dib la iskugu biiri karo iyo in kale. Haddii Shantii Soomaaliyeed dawlad ahaan loo kala baxo weli walaalnimadii Soomaalinimo waa halkeedii oo iyadu abid is ma beddeli doonto.
Oodweyne raqba waa ku rageed.
Galbeedi Soowtan golihiinii naaq daayey? oo heedhe tolow ma waxa u sabab ah Somalilndtaa duushay? Baryahan warar qurux badan aya jira'e ma lays diidsiinayaa wararka quruxda badan?
Hadaan Geesi noolayn Hadii aan gabood jirin Hadaan geedba taagnayn Hadii aabahay go'ay Goblan hooyaday tahay Maxaan goobta ii daran Kaligay ka gurayaa ? ............... Balse Hadii Geesi ii kaco Gayaankayga waan heli
In order to win chairman Cirro must change both his character and strategy.
Galbeedi Oo Samo ku waar baad qaadaysaaye; Sow adigaa karay midhaheedii lol, markii horaba may adkayn.
Si qurux badan ayaa Laascaanood looga dabaal degay.
An eyewitness from Mogadishu, parliament buying and finally a bomb shell
1984 ayaanu lahayn wax hala hagaajiyo,waa Malala garan waayey Dee, dabadeed dalkaygii waan la noqonay.
Waa tan heestu
Maxamed Dambigan mala awaalka ah eed shubayso ma ogtahay in malaa'ig qorayso,waliba qoraalkani sanaddo badan halkaasuu ku jirayaa. Teeda kale sowtii la yidhi dumarku waa beer ee fasha idinkoon xadka banaan ka baxayn. Badow yahow dib haw celin dadkan soo baraarugay! Ma daaraha Somaliland ku soo kordhaa ku dhibaya oo halkaa kula maray? Mise xaga Caarka ceeb keenay?
Barwaaqo replied to Haatu's topic in General
Waa halkii Faysal Cali Waraabe'e, wiilka reer Jigjiga ayaa iga xiga ka Muqdhisho.
After Senile Silanyo fails to help Awdal people, Somalia Gov says will step in
Galbeedi Laba mid yeel, tag dalkii oo u sheeg dadkeena sida ay u bedelaan sida ay u nool yihiin. Fikradaa SOL ku soo bandhigideeddu waa biyo col dhaanshay! Hadaanad dalkii tegi karin dad sidaa yeela siminaaro u fur oo fikradaa ha la tijaabiyo.
Senile Silanyo hands over a part of Berbera port to Ethiopia
Ma ma anaa cadkayga cayaar lagu cunaa, cadoow waa maalin. http://www.tradeadvocacyfund.com/taf-news/taf-supports-government-of-somaliland-in-key-trade-talks-with-neighbouring-ethiopia
Africa Intelligence:Hersi Gaab & Dahabshiil behind attempt to finance al shabab
Boowe ashaa hadal.
Silaanyo dhaliil ma diidin Somaliland kala gurkeeda doonimaayo Horta ina ayaad tahay? Ma harag shabeel baad huwan tahay? Hada Caaqillo ayaa meelaha codaynta jooga.
Horta ina ayaad tahay?
Galbeedi Wax la raaja rag kuma sama soo dadaji.
Beentu lug kaliya ayey leedahay lugtaa marka la qabta way dhacdaa, buluq hayaay! http://solaportal.com/Archive/2016/2/56solaportal